Global Voices teny Malagasy · 25 Aogositra 2012
25 Aogositra 2012
Tantara tamin'ny 25 Aogositra 2012
Antso Misokatra Ho An'ny Fandraisana Anjara Anatin'Ireo Atrikasa Mikasika Ny Fitaovana Dizitaly Ho Amin'ny Fiovàna Ara-tsosialy Any Goatemalà Sy Nikaragoà
Ny Rising Voices dia faly miara-miasa amin'ireo atrikasa roa ho tanterahana any Nikaragoà sy Goatemalà ho an'ny tanora mampiasa ny media dizitaly ho amin'ny fiovàna ara-tsosialy. Miaraka amin'ny mpiara-miasa aminay, Hivos sy ny mpikarakara ny atrikasa, Dialogía, hampivondrona ny tanora manodidina ny 18-25 taona eo ho eo ireo "toby" ireo...
Azia Atsinanana25 Aogositra 2012
Brezila: Bisikileta Mitondra Boky Ho An'ny Tsy Manan-kialofana
Amerika Latina25 Aogositra 2012
Raha toa ka mihoatra sisintany ireo hevitra tsara, ity iray ity dia bisikileta no nanaovany azy. Izany dia, nataon'ny Bicicloteca [pt], bisikileta iray izay mitondra famakiam-boky kely mamakivaky ny tanànan'i São Paulo, Brezila.
Zambia: Ravan'ny Polisy Mialoha Ny Fanafihana Fankahalana Vahiny Saika Natao Tamin'ireo Kongole Mpivarotra
Afrika Mainty25 Aogositra 2012
Nanakana izay azo lazaina ho valifaty mety nitarika fahafatesana maro sy fanafihana noho ny fankahalana teratany vahiny saiky natao an'ireo teratany avy amin'ny mpiray vodirindrina aminy, Repoblika Demokratikan'i Kongo, monina any Zambia, taorian'ny fandoran-ko faty ny mpamily Zambiana iray tany amin'ny tanàna Kongole any amin'ny sisintany any Kasumbalesa, izay nahatafiditra...
Eoropa Andrefana25 Aogositra 2012
Manomboka ny 1 Jolay 2012, ny mpamily fiara misy maotera rehetra ao Frantsa dia tsy maintsy mandalo 'éthylotest' daholo araka ny didim-panjakana nivoaka tao amin'ny Gazetim-panjakana tamin'ny Alakamisy 01 Martsa 2012. Io fepetra io dia heverina hampihena ny isan'ny loza aterak'ireo mpamify tsy ampy fiheverana domelin'ny alikaola. Maneho hevitra momba...
Ny Torolàlan'ny EFF ‘Hitandroana Ny Vohikalanao Mba Hitohy Handeha’
Manome paikady raitra hitandroana ny vohikala iray 'handeha' manoloana ny fanafihana amin'ny fandàvana ny tolotra ny torolàlana vaovaon'ny EFF, ny 'Fitandroana ny Vohikalanao Handeha' .
“Aza Matahotra Ny Aterineto”: Copyright Sy Fahalalahana Miteny Ao Anaty Atetineto
Fahalalahàna miteny25 Aogositra 2012
Anatin'ity sehatry ny fanentanana "Aza matahotra ny Aterneto" [es] ity dia hifantoka amin'ny fomba hahatongavan'ireo lalàna sasany momba ny copyright sy ireo fomba fanao hanakivy ny fampiasàna ny Aterineto ho an'ny fanehoan-kevitra. Ireto misy valinteny dimy fampidirana ho an'ny olana iray nampiray ireo mafàna fo eran-tany hiady amin'ny SOPA, ACTA,...